Tatoazy Japoney, mianatra manavaka azy ireo | Ny fanaovana tatoazy
Tatoazy amin'ny teny Japoney, mianatra manavaka azy ireo
Nat Cerezo | | Tattoo atsinanana
ny tatoazy amin'ny japoney Safidy matetika izy ireo hanoratra ny anarana sy ny teny izay ananantsika fifandraisana akaiky manokana. Na izany aza, raha tsy mampahafantatra tsara ny momba antsika isika dia mety hiafara amin'ny tatoazy ratsy tarehy na ratsy soratra ...
Noho izany, izahay dia nanomana an'ity lahatsoratra ity tatoazy amin'ny japoney hampianaranay anao hanavaka ny vaninteny roa amin'ity fiteny ity sy ny kanjis.
1 Ny hakanton'ny hiragana
2 Ny katakana, ny syllabary vahiny
3 Ny kanjis, endri-tsoratra avy any ampitan'ny ranomasina
Ny hakanton'ny hiragana
Hiragana no syllabary voalohany ianaran'ny Japoney. Heverina ho ny tsotra indrindra tamin'izy telo, ireo vehivavy eto amin'ity firenena ity no namorona azy io rehefa tsy nahazo nanoratra izy ireo. Ny hiragana dia misy tarehin-tsoratra 46 izay mamorona syllable (afa-tsy ny feo n, izay mandeha irery). Tsy manana sanda ara-kevitra izy ireo, fa fonetika, ary ampiasaina tsy ho famoronana teny iray manontolo fotsiny, fa ho toy ny sombintsombiny miaraka amin'ny verba, adjectif ...
Ny katakana, ny syllabary vahiny
Katakana no syllabary hafa an'ity fiteny ity, ary iray amin'ireo kintana amin'ny tatoazy amin'ny teny Japoney raha te hanoratra ny anaranao ohatra ianao. Amin'ny daroka tampoka sy tampoka kokoa, ny fampiasana katakana dia ny fandikana teny vahiny sy onomatopoeia. Na izany aza, mifanohitra amin'izay mety ho izy, Katakana dia noforonina taloha ela be, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, avy amin'ny sangan'ny litera sinoa.
Ny kanjis, endri-tsoratra avy any ampitan'ny ranomasina
Ary farany, ny kanji no andiany fahatelo azonao anavahana amin'ny tatoazy amin'ny teny Japoney. Nanafatra avy any Shina, amin'ny teny Japoney ny kanjis dia izao tontolo izao: Tsy vitan'ny hoe manoratra teny be fotsiny izy ireo, fa koa anarana mety ary, raha tsy ampy izany dia azo tononina amin'ny fomba maro samihafa! Tsy toy ny hiragana sy katakana, ny kanjis dia manana lanja ara-kevitra (izay azo atao indraindray ny mamintina ny dikany, fa tsy ny fomba fanononana azy).
Manantena izahay fa ity torolàlana hianarana hanavaka ny tombokavatsa amin'ny teny Japoney ity. Lazao aminay, manana tatoazy amin'io fiteny io ve ianao? Ampahafantaro anay amin'ny hevitra!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tattoo atsinanana » Tatoazy amin'ny teny Japoney, mianatra manavaka azy ireo
Tatoazy foko amin'ny sandriny
Ny dikan'ny tatoazy minimalista